Dhakhaatir u baxdey Miyiga 18 Jan 18, 2013 - 3:46:59 AM
Wasaarada Xanaanada Xoolaha Puntland ayaa koox dhakhaatiir ah oo ka kooban afar xubnood u dirtey maanta 18 January,2012 deegaano ka mida Miyiga gobollada Nugaal iyo Mudug.
Kooxdan bixitaankooda ayaa dabojoogey qaylo dhaan shalay ka soo yeertey dadka deegaanka ku dhaqan oo sheegey in xoolahooda cuduro kala duwan ay ku dhaceen islamarkaasina codsadey dawooyinka iyo talaalo in lala soo gaaro.
Dr.Cabdislaaan Warsame oo guddiga baaritaanka hogaaminaya ayaa Radio Garowe u sheegey inay u kuurgalayaan xaalada Caafimaad ee Hawdka Nugaal iyo Mudug xoolaha ku dhaqan.
Qiimeyn cudurada haya xanuunka iyo baaritaankooda ayaa ugu muhiimsan socdaalka Dhakhaatiirtan haatan sida uu sheegey Dr.Warsame.
Xoolaha iyo wax soosaarkooda ayaa badi waxa ku tiirsan dhaqaalaha Somalida guud ahaan.
Halkan ka dhageyso Siciid Axmed oo wareystey Dr.Cabdisalaan Warsame